Ubonile nje u-4: 44? Ukubona i-444ngokuphindaphindiweyoNanini na xa ujonga iwotshi ayisiyongxaki, kwaye kukho isizathu sokuba ubone le patheni yamanani kathathu ngeli xesha. Themba ukuba ubukhokelwa ngokwasemoyeni apha ukufumana malunga neentsingiselo ezahlukeneyo ezingama-444 kwindlela yakho kwayeukufumanisa ukuba yintoniIntsingiselo yentsingiselo yama-444 ithetha kuwe kwaye ngoba.
Kwinqanaba lakho, xa ubona u-444 ngokuphindaphindiweyo, uva ukuba uMkhosi oNgcwele uzama ukunxibelelana nawe. Ngenxa yoku, uyazi ukuba ukuphindaphinda ukubona i-444 (okanye i-4444) kuyintsikelelo kunye nomqondiso ovela kuThixo owenzelwe wena. Ukubona le patheni yamanani anemivo emi-3 (okanye enamanani ama-4) ngumyalezo ovela kuThixo kunye nekhwelo lokuvuka elithunyelwe ziingelosi ezivela kwiindawo eziphezulu ukukwazisa ukuba awuwedwa ngokwenene. Xa i-444 iphuma kuluhlaza okwesibhakabhaka nakwimbonakalo yakho ecacileyo, isebenza njengomyalezo weengelosi ngeli xesha ukukukhokela, kwaye inokuphinda iphindaphinde ukubonakala emva kokusweleka komntu omthandayo njengendlela yoku ukuthuthuzela .
Uqala ukuyikhumbula loo nto Umntu omthandayo ongasekhoyo unokubonelela ngoncedo kuwe kwicala lomoya, njengesikhokelo sakho somoya, kunokuba umntu omthandayo wayehlala nawe ngokwasemhlabeni. Gcina ukhumbula, 'ingelosi' ayingomphefumlo womntu omthandayo oswelekileyo, kodwa ungabuva ubukho bomphefumlo wakho omthandayo okujikelezile. Kwaye ngaphakathi emqolombeni wobukho bakho, unomphefumlo owaziyo ukuba uhlala ujikelezwe nguThixo kwaye ukhuselwe liqela lakho lezingelosi kunye nezikhokelo.
Ngapha koko, xa inani eliphindwe kathathu u-444 (okanye inani eliphindwe kane elingu-4444) liqhubeka nokubonakala ebomini bakho, unomphefumlo owaziyo ukuba eli nani lisebenza njengesixhobo okanye isikhokelo sokukunceda ufumane inyani. Kwaye ngokufunda nokuqonda ukuba ungubani kanye kanye, uzakhela eyakho ukomelela kokomoya kunye nesiseko . Ufumanisa ukuba kukho amandla angaphezulu ngaphakathi kuwe kunokuba wawucinga, kwaye la mandla okomoya akunika ukuzithemba kokuhamba kwicala elilungileyo apho kukho uxolo lwangaphakathi nokuzola naphi na apho uya khona.
Kwaye naphi na apho uya khona, uMhlaba ufuna ukuba uyazi ukuba nantoni na ohamba kuyo, uza kulunga. Khumbula nje ukuba ingelosi yakho ekugcinayo yeyakho isipho esikhethekileyo esivela kuMdali oMkhulu Kwaye yadalwa ngokukodwa kwaye yabelwa ukukhusela ngazo zonke iindlela-ke bambelela kwaye uzingise, landela ikhampasi yakho yangaphakathi ekhombe kukuKhanya, kwaye uyakudlula ngokukhuselekileyo. Esi sisithembiso.
Kungenxa yokuba kukho izizathu ezininzi zokuba ulibona rhoqo ngokulandelelana inani lama-444 naphi na apho ujonga khona, kubalulekile ukuba umamele ngononophelo ukuhleba okuthambileyo kwentliziyo yakho kwaye uyive into yokuba u-444 uthetha ukuthini ngokomoya kuwe. Landela intuition yakho kumanyathelo alandelayo alandelayo. Kwaye ukukunceda apha, nazi iintsingiselo zokomoya ezi-444 kunye nezizathu zokuba uhlale ubona ingelosi engu-444 kuyo yonke indawo.
Intsingiselo yokuqala ye-444: Iingelosi zixhasa ngokupheleleyo uhambo lwakho lobomi
Wenza ntoni xa uqhubeka ubona ama-444? Xa ubona ingelosi engu-444 ivela kaninzi ebomini bakho bokuvuka, okanye xa ubona ama-444 kumaphupha akho, imithandazo, okanye ukucamngca, uyazi ukuba i-Universe ikuthumela imiqondiso yethemba kunye nenkxaso kuyo yonke indawo. Intsingiselo ye-444, kule meko, kukuba ubukho boxolo njengoko iingelosi zifuna ukuba wazi ukuba zihlala zikujongile.
Iingelosi ziintlobo zamandla , kwaye banokubonakala kuwe ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobungakanani obukwenza uzive ukhuselekile kwaye ukhululekile ngokuxhomekeke kwinto okholelwa kuyo. Nokuba iingelosi zakho zibonakala kuwe njengezidalwa zomoya okanye ii-auras zokukhanya, izidalwa ezikhanyayo ezinkulu ezinesinxibo esikhazimlayo namaphiko, okanye ezimile ngendlela elula yomntu, owona msebenzi wazo kukukujonga kwaye ukukhusele. Uninzi lwazo zonke, unolwazi olunzulu lokuba iingelosi zinawe xa uziva ukulunga kwazo kusongelwe ngeenxa zonke kuwe.
Ukusuka kolu luvo, nanini na uqhubeka ubona ukuphindaphinda amanani angama-444, iingelosi zifuna ukuba uyazi loo nto Uxabiseke kakhulu kwaye ufanelekile kuba uzalwe nguMdali, kwaye ke, uyintlantsi encinci kuMkhosi wokuKhanya woMdali. Le ntlantsi yokukhanya ngumphefumlo wakho wobuthixo okhulayo kwaye uqaqambe ngalo lonke ixesha usasaza ububele emhlabeni. Kwaye njengomkhuseli wakho, unayo ingelosi yakho ekhuselekileyo ehlala ikhusela i-Spark kaThixo ngaphakathi kwakho. Ngamafutshane, Ingelosi yakho ekugcinayo ikukhusela kuba uyinxalenye yoMdali oMkhulu .
Ngokubanzi, xa inombolo 444 iphindaphindeka rhoqo kwindlela yakho yemihla ngemihla, ngumyalezo ovela kuThixo ukukunceda ukhumbule ukuba iingelosi zikufutshane kwaye zikulungele ukukunceda kuzo zonke iindawo zobomi bakho. Into ekufuneka uyenzile ukubacela ukuba bakuncede kwaye bakukhokele, kwaye baya kukulungela ukukuxhasa. Thetha nabo njengoko uza kuncokola nomhlobo wakho, kwaye ubuze imibuzo ngayo nantoni na nangayo yonke into ebalulekileyo kuwe.
Kwaye ukukunceda wenze izigqibo zobomi, iingelosi zihlala zikunika iingcebiso ngokuhlala ubeka iingcinga entlokweni yakho, okanye zinokubongoza omnye umntu ukuba azise ulwazi kuwe, endaweni yoko. Yiyo loo nto intsingiselo yokomfuziselo ye-444 yile urhangqwe ziingelosi zikaThixo kuyo yonke indawo njengoko uncediswa ekufumaneni oyena kanye kuhambo lwakho olungaphambili .
Ngokubalulekileyo, uyaqonda ukuba iingelosi azinakungenelela kukhetho lwakho lwenkululeko. Kodwa ngenkululeko yakho yokuzikhethela, uyazi ukuba ungamamela ukusebeza kwabo kwaye ulandele imiqondiso yabo ukuze ukhethe indlela efanelekileyo.
Isithandwa Sakho Esihambileyo Sithumela Umqondiso
Njengokuba ingelosi ikuthumela uphawu lwama-444, umphefumlo womntu omthandayo oswelekileyo unokukuthumelela umqondiso. Nokuba unephupha malunga nabo, fumana ifoto yabo yakudala, okanye uve into ekhumbuza bona, unoluvo lokuba umntu omthandayo ongasekhoyo unomyalezo kuwe, kwaye bafuna nje ukuba wazi ukuba bakufuphi wena.
Kwinqanaba elinzulu, uyazi ukuba ungaziva ngathi basondele kuwe xa uqhagamshela nomphefumlo wabo. Kwaye ukunxibelelana nomphefumlo wabo, ucinga ngabo kwaye uzive entliziyweni yakho njengoko uthetha ngenkumbulo yakho kubo.
Okona kubaluleke kakhulu, uyaqonda ukuba indlela onxibelelana ngayo nomntu obhubhileyo ukhetheke ngokukodwa kuwe. Xa kukho unxibelelwano lomphefumlo oluvakalayo kunye nomntu omthandayo ongasekhoyo, bafuna ukuba wazi ukuba balungile, bafuna ukuba uqhubeke uye phambili ebomini bakho, kwaye ikakhulu, bafuna nje ukuba wonwabe ngokwenene apho ukhoyo namhlanje .
Kumfanekiso omkhulu, xa unxibelelana nomphefumlo wabo, eneneni unxibelelana nentlantsi yabo yoMdali-uMdali owabazalayo. Kolu nxibelelwano lomphefumlo, uyakhumbula ukuba bakhuselekile eluxolweni kuba ekugqibeleni babuyele ekhaya kwakhona kwaye baphinde bahlangana noMdali oyiNgcwele.
Intsingiselo yesibini ye-444: Usendleleni yokuvuswa ngokomoya
Isizathu sokuba ubeUkuphindaphinda ukubona i-444 kukuba uya usazi ngakumbi indawo okuyo ngokunjengoko uziva ubungakanani obuphezulu bokomoya buvuleka kuwe. Ukubonakala okuphindaphindayo kuka-444 kukutsalela umnxeba ukukwazisa ukuba usendleleni yokuvuka, kwaye ngokwasemoyeni ungena kwelinye icala kwinqwelomoya yasezulwini. Kwaye kule nkqubo, uya usiba novakalelo ngakumbi kumandla kaThixo akhulayo kunye nokwanda ngaphakathi kwenyama yakho njengoko uziva unamandla afihlakeleyo kwindawo okuyo ngoku. Okukhona uqala ukufunda ngale ndlela intsha, kokukhona ufuna ukufumana oyena mntu.
Njengokuba ingelosi engu-444 isoloko ibonakala emendweni wakho, uthatha amanyathelo akhokelwayo ekufumaneni oyinyani kwaye ufumana izitshixo zokuvula inyani yakho. Kwangelo xesha, umphefumlo wakho ukukhuthaza ukuba utyhile iimfihlelo ezinzulu zendalo iphela ngokufundaukuziphuhlisaiincwadi okanye ukufunda malunga nokuphilisa amandla, iingelosi, izikhokelo zomoya, iikristali, ukubhula ngamanani, ukuvumisa ngeenkwenkwezi, okanye ezinye izixhobo zokuvumisa ezikunceda unxibelelane noMdali oNgcwele-iNyaniso- ngaphakathi kwakho.
Okukhona ufunda ngenyaniso yakho njengomntu wokomoya ophilayo, kokukhona uya kuqonda ukuba ahlukanga kuMdali. Ngale nxu lumano, uyaqonda ukuba intsingiselo ye-444 yeyokuba ngokwenene Mnye noMdali ongenasiphelo. Ufikelele kwinqanaba lobomi bakho apho unesibindi sokwahlukana neenkolelo zakudala, kwaye Unamandla okuseka iinkolelo ezintsha ukuze uguquke ube nguYinyani .
Khumbula isiqu sakho sokwenene
Kule nkqubo iguqukayo, ufunda kwaye uqonde ngakumbi ukuba ungubani kanye kanye. Imihla ngemihla, wisikhukukazi 444 sihlala sibonisa indlela yakho,uvusa kwaye ukhumbule apho uvela khona, apho uya khona, kwaye ngoba.
Ngokuphonononga nzulu izibongozo zomphefumlo wakho, unxibelelana nentlantsi ekhethekileyo yomlilo engcwatyelwe ngaphakathi kwakho. Uqala ukuqonda ukuba le ntlantsi yomlilo uyiNyaniso, kwaye Oyinyani ulilangatye elivuthayo elizalwe yimitha yoMlilo yoMdali.
Xa uhlala ubona i-444 kule ndlela, uyayikhumbula loo nto uvela kumnombo wasebukhosini wothando olungenamiqathango kunye noxolo . Ukusuka kulo Mthombo, ungumntwana woMdali oNgcwele, kwaye lo 'mntwana' - isiqu sakho sokwenene okanye umphefumlo-ukhuselwe emzimbeni wakho.
Uyaqonda ukuba ekuhambeni kwexesha, isiqu sakho siya kutshintsha kwaye sidlule, kodwa umphefumlo wakho unaphakade kwaye uya kuqhubeka . Ngesi sizathu, xa inani elingcwele lika-444 livela endleleni yakho, uyakhunjuzwa sebenzisa ixesha lakho namandla akho ekugxileni kwizinto ezintle ezikhulisa umphefumlo wakho , endaweni yezinto zangaphandle ezikukhawulelayo.
Nje ukuba ukhumbule isiqu sakho esingcwele, uqala ukuqonda umfanekiso ofanayo kaThixo kubo bonke abanye abantu . Kwaye ngamehlo akho avukileyo, uyakhumbula ukuba wazalelwa ukuba uphumelele kunye nelifa lakho lobuthixo ngeetalente kunye nezipho ezilindele ukufunyanwa ngaphakathi ngaphakathi.
Mamela kwi-Intuition yakho kwaye uyithembe indlela yakho
Kuhambo lwakho lokufumanisa ngokwakho, uqala ukuthembela ukuba uhamba kwindlela elungileyo njengoko inani elingu-444 liphindaphindeka livela ebomini bakho. Ngumqondiso ocacileyo ovela kuMdali nakwiqela lakho lokomoya ukuba ulapho kanye ubufanele ukuba ubekhona.
Xa ulandela intliziyo yakho kwaye umamele eyona nto ihambelana nawe kwinqanaba lomphefumlo, uyaqonda ukuba ukhokelwa nguThixo kwindlela yenjongo yakho, yiyo loo nto ubona u-444 evela rhoqo kwindlela eya phambili.
Kule ndlela ikhokelwayo, uMhlaba uyakukhumbuza luthembe uhambo lwakho, themba indlela obuqhubeka ngayo ubomi bakho, kwaye uthembe ukuba ulapho kufuneka ubekhona ngalo mzuzu wangoku . Oku kuthetha ukuba i-444 yisithunywa sakho esivela kuThixo sikuxelela ukuba ube nokholo kwaye uqiniseke ukuba izinto zihamba ngendlela elungileyo, njengoko iziganeko zityhilwa kuwe ngexesha eliNgcwele.
Kwisicwangciso sobuchule soMdali, ukubona i-444 ayisiyongxaki kwaphela. Ngokuqonda kwakho okuphezulu, uyakhunjuzwa ukuba i-444 sisikhokelo esivela kuThixo esivela kwindalo iphela sokwazisa ukuba yonke into ikusebenzela njengoko ukhokelwa ngokukhuselekileyo. Ngamanye amagama, 'uyangcangcazela ngokuvisisana' okanye 'uhambelana' noMoya xa ubona i-444. Inombolo kaThixo engu-444 ikukhumbuza ukuba uhlangana noMhlaba wonke ngokuhambelana ngokugqibeleleyo. Ngokusisiseko, uku-longuevelth efanayo noMdali ongenasiphelo.
Endleleni yakho iyonke, intsingiselo yama-444 kukwamkela yonke into eyenzekayo ebomini bakho ngokuthembela ukuba izinto zikuhambela njani. Kwaye khumbula: ulapho kanye kufuneka ubekho- apha kwaye ngoku.
Intsingiselo yesithathu ye-444: Yenza iSiseko esiQinisekileyo soMoya
Xa inani elingu-444 liqhubeka libonisa indlela yakho, sisikhumbuzo sokwakha isiseko sokomoya esomeleleyo kwayeukukhula ubuhlobo bakho noMdali. Ngale nto uqondayo, uyakuqonda ukubaluleka kokunxibelelana noMdali oyiNgcwele yonke imihla njengawe yakha kwaye uye kwikamva . Uyaqonda ukuba 'isiseko' sakho siyafana nesiseko sendlu apho umhlaba uxhasa khona iibhloko zobomi bakho. Kwaye njengokuba kuthatha ixesha ukubeka isiseko esiqinileyo sendlu, uyazi ukuba kuthatha ixesha ukwakha isiseko sokomoya esiqinileyo somphefumlo wakho. Ngale ndlela, intsingiselo ye-444 kukomeleza isiseko sakho somoya ngokuchitha ixesha ufumanisa kwaye evuma ubukhulu bakho bokwenyani kwilizwe lakho .
Ke, xa ubona ama-444 rhoqo, uyakhunjuzwa ukuba wakhe isiseko sokomoya esomeleleyo apho umile nzulu, usekwe, kwaye uzinziswe kwihlabathi lakho. Uqala ukuqonda ukuba ukuba nomoya onamandla kukuzithemba, uzinze phantsi koxinzelelo, kwaye ulungele nantoni na. Njengoko usiya phambili ngekhuselo lamandla akho okomoya, isiseko sakho esomeleleyo sikunceda ukuba ulungiselele izivunguvungu zobomi. Ukongeza, iyakuxhasa ekukholweni ukuba unokwenza nantoni na, kuba wakho uqobo uyazi ukuba xa ufumana isibindi sokuvala umnyango ngenxa yoloyiko, unesibindi sokuvula umnyango omtsha kwizinto ezinokwenzeka .
Yomeleza Isiseko Sakho Sokomoya Ngomthandazo Nokucamngca
Ukuxhasa isiseko sakho sokomoya, ukubona inombolo kaThixo engu-444 kukukhumbuza ukuba uchithe ixesha noMdali emthandazweni nasekucamngceni. Umthandazo kunye nokucamngca kuqinisa ubudlelwane bakho noMdali ngokukunceda wazi ngakumbi ukuba ungubani kwaye ngokukunceda uqonde ngakumbi ngendima yakho kunye nenjongo yakho kobu bomi.
Ngenjongo yakho yokuqinisa ubudlelwane bakho noMdali kunye nokufuna isikhokelo, ufumana ixesha kunye nendawo apho uMdali anokukuva uthandaza. Kwaye gcinani engqondweni, xa uthandaza, uya kuMdali kanye njengomntwana esiya kumzali onothando okanye kumgcini wakhe. Ngokwenza njalo, eyakho Umthandazo uyabuvuma ubukho boMdali ebomini bakho ngendlela yothando.
Ukongeza, kuthe cwaka ngokucamngca, unokufikelela kwi-intuition yakho yokuva uMdali ethetha kwaye ufumane iimpendulo ozifunayo xa ujonge iimvakalelo zakho eziza ekuphenduleni umthandazo wakho. Kwaye ngale ndlela yokungena kukaThixo, uzivulela isikhokelo sikaThixo ukuze akubonise indlela elungileyo. Ngokuphawulekayo, ukubona i-444 yindlela yoMdali yokukhanyisa umendo wakho .
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngexesha lokucamngca, imeko yakho yokomoya inyukela kwinqanaba eliphezulu lokuqonda apho Ngokwenene uya 'ekhaya' kuMdali . Umphefumlo wakho sele uyazi yonke into, kwaye uya apho ufuna ukuba khona ngexesha lokucamngca; umphefumlo wakho ufuna ukukhuseleka kunye nokuthuthuzela 'ekhaya.' Kwaye 'ikhaya lilapho intliziyo ikhoyo,' ikhaya kulapho umphefumlo wakho ukho . Ngaphakathi ezantsi, uyazi ukuba akukho ndawo enje njengekhaya.
Kwaye koku kuthula, uyaqonda ukuba unxibelelana nesiqu sakho sokwenyani, uThixo ongaphakathi kuwe. Ukubeka ngokulula, uyabubona ubunye bakho noThixo, kwaye ngalo mzuzu, ubunye bakho buyinyani yakho yobuthixo.
Ngokubanzi, intsingiselo ye-444 kukukukhumbuza ukuba umthandazo kunye nokucamngca zizipho zokuthula ezivela kuMdali ukukunceda ukhumbule ukuba uThixo uhlala enawe. Kwaye ekupheleni komthandazo nokucamngca rhoqo, uyakhumbula ukuba uxolo loMdali lungaphakathi kuwe, kwaye ubuyisa nembewu yoxolo yoMdali oyiNgcwele ukuze ondle kwaye utyale kwihlabathi elibonakalayo .
Khumbula, uluxolo olufunayo.
Intsingiselo yesi-4 ka-444: Cinga phambili kwaye ucwangcisele ikamva lakho
Tyala Imbewu Yekamva Lakho
Intsingiselo ye-444 kukucinga ngekamva lakho kunye nokwenza isicwangciso sokukunceda ufike apho. Xa usenza isicwangciso sezinto ezibalulekileyo kuwe, unamandla okuyila okwenza ukhetho kwaye ukhethe indlela yobomi ebaluleke kakhulu kuwe.
Ngengelosi inombolo 444 njengesikhokelo sakho, uqala ukuqonda ukuba ukwenza iinkqubo ezifanayo zemihla ngemihla, ukuphindaphinda, kuya kukunika iziphumo ezilindelekileyo ezifanayo. Ke, ukufezekisa iziphumo ezahlukeneyo, uyaqonda ukuba kufuneka utshintshe into kubomi bakho bangoku kwaye thatha inyathelo elitsha ekubumbeni ikamva elahlukileyo .
Kwaye xa ubona inani elingu-444 liphindaphindeka livela kwindlela yakho yangoku, uyakhumbula ukuba ikamva lakho elitsha lixhomekeke kwiingcinga zakho ezintsha, iinkolelo zakho ezintsha, nakwizenzo zakho ezintsha -ngoku. Yonke ingcinga, zonke iinkolelo, kunye nezenzo zonke zibonisa ukungcangcazela okunamandla okutsala ukungcangcazela okulinganayo kwezimvo, abantu kunye namava kwinyani yakho ebonakalayo. Ngamafutshane, utsala izimvo, abantu, kunye namava ahambelana 'nento oyiyo.' Kwaye ngenxa yesi sizathu, uyakuqonda ukubaluleka kwe ugxile kulo lonke ixesha lakho namandla akho kwindalo elungileyo ebonisa ukuba ungubani .
Njengoko ujonga umfanekiso omkhulu xa usenza into ebomini bakho, uyakhumbula ukuba uphefumla amandla kaThixo okudala yonke imihla kwaye ukwalathisa la mandla wokomoya kwinjongo yakho yendalo . Kwaye xa ubona inani eliphindaphindwayo elingu-444 ebomini bakho, luphawu lwenkxaso kaThixo ukugcina ujoliso lwakho kwinjongo yakho.
Xa ulandela injongo yakho ngokuzimisela kwaye uneengcinga ezifanayo, iinkolelo, kunye nezenzo ezihambelana nenjongo yakho, uya kuqokelela amandla okomoya ukubonisa indalo yakho. Ukongeza, xa usebenzisana neqela, amandla okomoya anokukhula ngakumbi xa abanye bekunceda ukufezekisa injongo yakho ngokuzimisela kwabo kunye neengcinga zabo ngokudibeneyo, iinkolelo kunye nezenzo ezihambelana nenjongo yakho. Nje ukuba la mandla okomoya afumane amandla awaneleyo kwaye agcinwe kwaye omelezwe ngokuhamba kwexesha, uya kuqala ukubona indalo yakho ibonakalisiwe ngexesha lakho lomzimba . Ngale ndlela, intsingiselo yokubona i-444 rhoqo kukuqinisekisa ukuba injongo yendalo yakho ikwinkqubo yokubonakalisa kwinyani yakho.
Nangona kunjalo, ukuba utshintsha ingqondo yakho malunga nenjongo yakho yoqobo, okanye ukuba ubuyisela amandla akho kwinjongo eyahlukileyo, uya kuthumela loo mandla okomoya ukondla nokondla enye injongo. Ukusuka kolu luvo, uyakuqonda ukubaluleka kwamandla akho okudala kunye nokubaluleka kokugcina onke amandla akho kunye nokubeka kwiinjongo ezibaluleke kuwe.
Ngokubanzi, intsingiselo ye-444 kukugxila kwiinjongo zakho njengokutyala kunye nokondla imbewu. Ngale ndlela, xa utyala imbewu yenjongo kwaye uyikhathalela ngokukhethekileyo ukuyondla, imbewu yenjongo yakho iya kuthi ekugqibeleni ihlume ibe ngumthi weziqhamo oneengcambu njengesiseko sakho kunye neziqhamo ezilungele ukuvunwa njengomvuzo wakho.
Khulisa iitalente zakho zendalo kunye nezipho
Xa ubona inani elingcwele lika-444 livela endleleni yakho, sisikhumbuzo sokuqinisa isiseko sakho sokomoya ngokusebenzisa iitalente zakho zendalo kunye nezipho zokomoya. UMdali uzinike wena kunye ulindelo lokuba uya kukhula kwaye wabelane ngezipho zakho nehlabathi . Kwaye ngenxa yokuba izipho zakho ezingcwatyiweyo zilindele ukufunyanwa okanye ukusetyenziswa, uqala ukuyiqonda loo nto Injongo yakho kukuchonga kwaye 'uvule' zonke izipho akunike zona uMdali ukuze uzokwabelana ngazo ngexesha elifanelekileyo nelizwe lakho .
Uqala ukukhumbula ukuba xa unomphefumlo onqwenela ukwenza into, ubuchule bakho butshiswa yimincili, kwaye yile ntlantsi ekuvusayo kwaye ikukhuthaze ukuba ukhulise iitalente zakho nezipho zokomoya. Ngengelosi inombolo 444 njengesikhokelo sakho, uyaqonda ukuba ukuziqhelanisa okunzulu kuyafuneka, kwaye xa uqhelisela okwaziyo, izipho zakho kunye neetalente zakho ziya kukhula .
Xa uchonga isipho okanye italente ofuna ukuyikhulisa, uqala ukuzingqonga ngootitshala ababonisa umsebenzi ogqwesileyo kwiindawo onqwenela ukuzazi. Njengokuba ujonga aba titshala, ufunde iincwadi zabo, umamele iintetho zabo, kwaye ufunde kubo, uyazamkela izifundo zabo kwaye ngokuthe ngcembe uvumele impumelelo yakho ilandele.
Ngokubalulekileyo, nanini na xa ubona u-444, uyaqonda ukuba nantoni na ogqiba ukuyenza, uya kuhlala usenza konke okusemandleni akho ukuze phuhlisa imikhwa yokwenza usuku ngalunye lube ngumsebenzi wobugcisa obalaseleyo . Ukusuka kolu luvo, uyaqonda ukuba yimpembelelo yakho eya kuthi inyathele ebomini bakho kwaye yimpembelelo yakho eya kuthi itshintshe umhlaba okujikelezileyo.
KwisiCwangciso seNkosi esiBanzi, xa inani elinemivo emi-3 444 ngesiquphe libonisa indlela yakho, uyakhumbula ukuba uThixo usebenza ngokungummangaliso ngeziganeko zobomi ezingalindelekanga ukulungiselela wena ukuba wenze into enkulu ngezipho kunye neetalente zakho. Nokuba uchaphazela enye okanye uninzi, uyakuqonda oko Isipho soMdali kuwe esiba sisipho sakho emhlabeni , kwaye ekugqibeleni, ikwayisipho esisendleleni ebuyela kuMdali oNgcwele.
Hlawula ikamva lakho
Enye intsingiselo yama-444 kukukhumbula ukuba imali isebenza njengesiseko senkululeko yakho yezemali kunye nokukhula komntu. Ngale nto engqondweni, uqala ukuqonda ukuba eyakho Uhambo lomntu ukuya kwinkululeko yezemali eneneni luhambo lokomoya . Kwaye ngokulandela ubizo lomphefumlo wakho kuhambo lwakho lwasemoyeni, uyaqonda ukuba isiseko esomeleleyo semali, ngokonga notyalo mali, sikunika inkxaso ezinzileyo oyifunayo ukuze ujolise ngokupheleleyo kwinjongo yomphefumlo wakho, uthathe amanyathelo kwizinto ezinentsingiselo ofuna ukuzenza. kobu bomi, kwaye ube noxolo nohambo lwakho olungaphambili.
Ngokombono womphefumlo wakho, sele uyayazi loo nto imali ngamandla , kwaye ukugcina nokutyala imali yakho luhlobo lwe ixesha lokuhamba elikunika ithuba lokuthumela imali kwikamva lakho . Ngale ndlela, intsingiselo ye-444 kukwakha isiseko semali esixhasayo kwaye sikubeka kuqala. Kwaye xa ubeka ingqalelo yakho kuwe nakukhuseleko lwezezimali, amandla akho okuqwalaselwa akunika amandla okukholelwa ukuba unokuyiphumeza injongo yakho.
Ulwakha njani ukhuseleko lwakho lwezezimali luhlukile kuwe, njengendlela yakho yobomi kunye nenjongo kweli hlabathi. Ngelixa usakha isiseko sakho sezemali kwaye uyilungelelanisa nenyaniso yakho yobuqu, ukubona ukulandelelana kwe-444 kukunceda ukuba uyiqonde loo nto Imali idlala indima ebalulekileyo njengotitshala wakho kuhambo lobomi bakho.
Njengenxalenye yohambo lwakho kunye nengelosi inombolo 444 njengesikhokelo sakho, uyazi ukuba imali ikufundisa ngawe nangokubalulekileyo ebomini bakho. Kwaye ngokujonga imbali yezobomi bakho, uqala ukufunda ukuba indlela ochithe ngayo imali ngaphambili ibonisa izinto eziphambili ngokubaluleka kwaye yintoni 'eyayibalulekile' kuwe ngelo xesha. Ngolu lwazi, uqala ukubona ukuba yintoni 'ebalulekileyo' kuwe kwaye wenze utshintsho, emva koko wenze isicwangciso esitsha senkcitho esibonisa amaxabiso akho namhlanje.
Kwaye nokuba ulixabisile ixesha lasekhaya, ixesha lokuhamba, ixesha lesikolo, okanye ixesha lomhlala phantsi, isicwangciso sakho esitsha sezemali sibonisa inkcitho yemali kwinto oyixabise kakhulu. Kwinqanaba lakho, uyathemba ukuba olu tshintsho luya kukumilisela apho ufuna ukuba khona kwikamva lakho.
Ngokubalulekileyo, uyawuqonda indlela yokuchonga ngokuthembekileyo umahluko phakathi kweemfuno zakho kunye nezinto ozifunayo. Yiyo loo nto ngokususa 'ukungqubana kwezemali' kunye nokubeka izinto eziphambili ngokubaluleka ngokweemfuno zakho eziyimfuneko, uyila icebo elicacileyo lezenzo zemali elinempembelelo entle kubomi bakho. Uninzi lwazo zonke, xa ubona u-444 ephindaphindeka evela kuhambo lwakho, uyakhumbula ukuba imali asiyonjongo yobomi bakho, kodwa unayo Isiseko semali esizinzileyo sikunika ithuba lokufezekisa injongo yomphefumlo wakho ngoxolo , endaweni yokuba nexhala kunye nokungaxakeki.
Gcina ukhumbula, uyokhula kwisigqibo ngasinye osenzayo, kwaye izinto eziphambili ngokubaluleka zingatshintsha njengoko utshintsha ngezifundo zobomi. Ngokutshintsha kwaye uphinde wenze umbono wobomi bakho ngokusekwe kwinto ebalulekileyo kuwe kuwo onke amabakala obukho bakho, uqala ukubona ukuba uyatshintsha kwaye uyakhula ube ngumntu onguye ngokwenyani. Koku kuqonda, ukubona ama-444 kukunceda ukhumbule ukuba uyile nto uyidalayo kwisigaba ngasinye sohambo lwakho lobomi.
Intsingiselo yesihlanu ye-444: Yomeleza ubudlelwane bakho
Chitha ixesha loMgangatho Nabathandekayo Bakho
Ukubona i-444 kukunika ithuba lokugxila kunye nokubeka phambili kwezona zinto zibalulekileyo ebomini bakho, kwaye kwangaxeshanye, kuyanceda ukuba ukhumbule ukwakha nokuqinisa isiseko sabo bonke ubudlelwane bakho. Kule nkalo, uyalixabisa iqabane lakho, usapho, okanye abahlobo, kwaye uyabazisa ukuba ubathanda kangakanani kwaye uyabaxabisa. Ngolu lwazi olunzulu, uyakhumbula ukuba enye yezona zinto zibalulekileyo uzifezekisileyo kweli xesha lokuphila kuku ube ngumntu olungileyo kubo bonke ubudlelwane bakho .
Nokuba ungutatomkhulu, ungumzali, iqabane elibalulekileyo, umntakwenu, okanye umhlobo, ubukho bakho buzisa ukuzola kumaxesha abalulekileyo omthandayo. Kwaye njengoko ucinga nzulu, unentliziyo eshushu eyazi loo nto ububele bakho buchaphazela ubomi babo kwaye buba ngumtya owomeleza amaqhina akho okomoya kunye .
Kwaye xa ubona i-444 ivela kuThixo phambi kwakho, uyakhunjuzwa ukuba unike abo ubathandayo ingqalelo yakho xa nichitha ixesha kunye. Nokuba lixesha lokutya okanye ixesha lokudlala, Ujoliso lwakho 'lixesha elifanelekileyo,' kunokuba 'lixesha lobungakanani.' Uyaqonda ukuba xa usondelelene nabantu obathandayo ngale ndlela, wakha isiseko sobudlelwane obunentsingiselo.
Ngapha koko, ukuba ungumzali okanye umlondolozi, uqala ukuqonda ukuba umntwana wakho ukujongile. Uya usazi ngakumbi ngendlela yokubonisa iindlela zokujongana nemiceli mngeni yobomi ukuze umntwana wakho afunde iindlela ezinemveliso zokunxibelelana nemingeni yabo yobomi. Ke, ngale ndlela, xa ubonakalisa umbulelo ngazo zonke izifundo ebomini bakho, umntwana wakho uya kuphuhlisa umoya wokubulela ngawo onke amathuba okukhula komntu ebomini bakhe.
Kumfanekiso omkhulu, xa ubona i-444, sisikhumbuzo sokubhiyozela ukukhula kunye nempumelelo yabathandekayo bakho kwaye uqaphele imizamo yabo yokwenza inkqubela phambili kwiinjongo zabo. Ngenxa yoko, ukonyusa ukuzithemba kwabo kwaye ubakhuthaze ukuba babe zezona zinto zibalaseleyo abanokuzifumana kweli lizwe lihlala liguquka.
Ngokubalulekileyo, ukubona u-444 kukunceda ukhumbule ukuba okukhona uvakalisa inkxaso yakho eqinileyo kwabo ubathandayo, kokukhona baya kukhululeka ngakumbi ukuba babelane nawe ngamabali abo obomi. Kwaye kumbindi womphefumlo wakho, uyawaqonda ngokupheleleyo amabali abo kuba uziva indlela abavakalelwa ngayo, kwaye oku kukudibana kwakho nabo. Ngokubonisa umdla wokwenene kubomi babathandekayo bakho, Unxibelelwano lwakho nabo lubenza bazive bexabiseke ngokwenene kwaye befanelekile ukuba baphile .
Ekugqibeleni, intsingiselo ye-444 kukuba ngumthombo othembekileyo wenkxaso kubudlelwane bakho nabantu obathandayo. Nokuba uphi, uyaqonda ukuba unokwenza ixesha elininzi ukufikelela kubantu obathandayo kwaye ubabonise ukuba ubakhathalele. Kwaye njengoko unxibelelana nomphefumlo ngamnye kwaye ubachukumise, uqinisa imisonto yokomoya edityanisiweyo ukuze imise ilaphu elimibalabala elisasazeka kubomi bakho bobuntu- nakwabo.
Joyina iTribe Yomphefumlo Ocinga NjengeNkxaso
Xa ubona ama-444 aphindaphindiweyo emendweni wakho, sisikhumbuzo esivela kuThixo sokuqinisa ikamva lakho ngokwakha ubudlelwane nemiphefumlo efanayo. Ukusuka kolu luvo, uqala ukubona ukuba uyimbonakalo yabantu ebomini bakho. Kwaye ngolu lwazi, uqala ukuzingqunga nabantu ababonisa ukuba ufuna ukuba ngubani, kuba uyaqonda ukuba bubudlelwane bakho obumisela ukuba uza kuba ngubani.
Njengokuba usiya usazi ngakumbi unxibelelwano lwakho, uyaqonda ukuba ukuba yinxalenye yoluntu okanye isizwe esinemiphefumlo eneengcinga ezifanayo kunokuba sisikhuthazo esinamandla kuba siyawondla umphefumlo wakho xa ufuna inkxaso ukuze ube lolona hlobo lukhulu.
Ekugqibeleni, ungumphembeleli, kwaye uphenjelelwa ngabantu abakungqongileyo . Ngengelosi inombolo 444 njengesikhokelo sakho, uyakhumbula ukuba unokhetho lokusebenzisa ifuthe lakho kutshintsho oluqinisekileyo. Kuba wonke umntu uqhagamshelwe, igalelo lakho sisipho esikhethekileyo ngokwenyani kubantu abasehlabathini lakho. Uyaqonda ukuba iitalente zakho kunye nezipho zikunika ithuba lokunceda abantu abakungqongileyo- njengoko uMdali wayefuna-kwaye sisiseko esikunceda ume kunye kwaye uphakame.
Iintsingiselo ze-6 ze-444: Hlonipha kwaye uKhathalele uMzimba wakho oPhathekayo kuhambo lwakho lokomoya
Hlamba kumandla okuphilisa endalo
Xa ulandelelwano lwamanani lwama-444 lubonakala ebomini bakho, kusisikhumbuzo kuwe ukuba ujonge kwihlabathi elikungqongileyo kwaye uqaphele umfanekiso opheleleyo weNdalo. Ukusuka kolu luvo, ubona iminwe kaThixo kuyo yonke into, naphina .
Njengoko ilanga liphuma kwaye likhanya kwimitha yakho, uyabubona ubuhle bobugcisa bomsebenzi woMdali okujikelezileyo. Kwaye xa ujonga ngononophelo ngelaphu lehlabathi, uyabona ukuba uThixo uthatha ixesha ukuseta indalo ukuba ihambe ukuze ukwazi ukubona izinto ezinje ngezityalo zihluma kunye neentyatyambo zidubula, imilambo iqukuqela, kwaye ishiya ukurhashaza njengoko kuvuthuza umoya ovuthuzayo. Njengoko uchitha ixesha elininzi kwimvisiswano yendalo, uye wazi ngakumbi ezinye izinto, amavumba, kunye nezandi ngelixa uziva umhlaba uphantsi kweenyawo zakho xa uhamba kwisingqi sokubetha kwentliziyo yendalo.
Ngolu lwazi, uyayiqonda loo nto wadalelwa ukonwaba ngayo yonke imvakalelo yakho yenyama kunye neyasemoyeni yokubona, isandi, ivumba, incasa kunye nokuchukumisa. Uyaqonda ukuba izivamvo zakho ziyakunceda uqaphele kwaye uqonde ukuba kwenzeka ntoni na macala onke ukuze ukwazi ukutolika zonke iimpawu eziphindaphindayo ezingama-444 kwindlela uMdali akubekele yona.
Ngokubanzi, xa ubona ingelosi inombolo 444, uyakhumbula ukuba imeko yendalo ityebile kumandla kaThixo ahamba kuyo yonke indalo, kwaye nguMkhosi woBomi okondla bonke ubomi. Xa uphefumla umoya omtsha, uvumela lo Mkhosi woBomi ukuba uqukuqele kuwe, kwaye ukubuyisele kwaye ukomeleze . Ngamanye amagama, unxibelelwano lwakho olwandileyo kwindalo lomeleza isiseko sakho somoya njengoko sikubeka ngokulungelelana nobuThixo, kwaye ivumela amandla okuphilisa oMdali ukuba ahambe kuwe . Kwaye koku kuhamba, uyaqonda ukuba ukuba kwindalo kukunceda unxibelelane noKwakho kweNyaniso, onguMdali oyiNgcwele kuwe.
Wuhloniphe Umzimba Wakho Wenyama NjengeTempile Engcwele Kumhlaba Ongcwele
Kwinqanaba lomphefumlo wakho, uyazi ukuba uhlala ukhokelwa yimiqondiso. Kwaye xa uqhubeka ubona ipateni yamanani iphindayo ebomini bakho, uyazi ukuba ngumyalezo womoya owenzelwe wena. Kule meko, xa i-444 okanye i-4444 ibonakala iphindaphindeka ebomini bakho, intsingiselo yokomoya kuku yinyamekele impilo yakho yomzimba ukuze ube namandla omzimba wokuxhasa impilo yakho yokomoya .
Njengomntu wokomoya, uyakhumbula ukuba umphefumlo wakho wazalwa nguMdali ekuqaleni kweNdalo. Kwaye njengesipho kuwe UMdali unike umphefumlo wakho ithuba lokudlala indima ebalulekileyo kobu bukho bomntu . Koku kuqonda, uyakhumbula ukuba umzimba wakho awunamphefumlo, kuba ngokwenyani unjalo umphefumlo wakho onomzimba wenyama .
Kobu bukho bomntu, xa ubona ama-444 ngokuphindaphindiweyo, uyakhunjuzwa ukuba umzimba wakho umele indawo yentlanganiso phakathi kolawulo lobuthixo kunye nomhlaba apho umphefumlo wakho uhlala khona. Kwaye njengendlu ekubonelela indawo yokuhlala, umzimba wakho wenyama unika indawo yokuhlala umphefumlo wakho . Kolu khanyiso, uyakhumbula ukuba umzimba wakho wenyama sisipho soMdali kuwe, kwaye isebenza 'njengendlu engcwele' evala intlantsi yomphefumlo wakho, yona ilukhanyiso lokuKhanya okuvela kuMdali oNgcwele.
Ngale nto uyayiqondayo, kunye nama-444 njengesikhokelo sikaThixo, uqala ukuqonda ukuba xa uhlangana nomnye umntu, umi emhlabeni 'ongcwele' phambi koMdali oyiNgcwele. Ukusuka kolu luvo, uyamhlonipha wonke umntu odibana naye, kuba Uqonda uThixo kubo, nabo bayamazi uThixo kuwe .
Ngale nto, uqala ukuhlonipha umzimba wakho wetempile njengetempile kumhlaba ongcwele. Kwaye ukugcina 'itempile yakho' ihlala ihleli, uyazi ngakumbi impilo yakho. Ngokwenza njalo, ujonga impilo yakho, ususa imikhwa emibi, kwaye ulumke ngakumbi ekukhetheni ukutya okusempilweni okubangela ubukho bakho njengomntu.
Ngapha koko, uqala ukwenza ixesha lokuzilolonga rhoqo kuba uyayiqonda loo nto Nanini na xa uphefumla kwaye ukhupha, ujikeleza amandla kaThixo kuwo wonke umzimba wakho ukuze uzalise kwaye uphilise wena uphelele . Kwaye okona kubaluleke kakhulu, uqala ukucwangcisa ixesha elininzi lokuphumla uzolile ukuze uve uMdali ethetha nawe kwaye akukhokele. Intsingiselo ye-444, ngale ndlela, kukubuyisela uxolo ngaphakathi kwakho.
Lilonke, xa ujonga umfanekiso omkhulu ngokwembono yoMdali, uyayiqonda loo nto Ngokwenyani uyindalo ebonakalayo egqibeleleyo yobizo lwakho olukhethekileyo kunye nenjongo emhlabeni . Kwaye xa ngequbuliso ubona i-444 ivela kuThixo kwindlela yakho, khumbula ukuba umphefumlo wakho kunye nomzimba womzimba usebenza kunye njengeqela kwimishini. Ngokukhathalela impilo yakho yemihla ngemihla, ufumana amandla kunye nokucaca njengoko ukhula ngokomoya usazi ngohambo lomphefumlo wakho olumangalisayo.
Yintoni omele uyenze ngokulandelayo xa uqhubeka nokubona i-444?
Intsingiselo iyonke ye-444 kukuba ukhokelwa ngokwasemoyeni ukuba uthembe isiQinisekiso sakho seNyaniso njengoko unjalo ukwakha isiseko sekamva lakho kwaye ubonakalisa umbono wakho kolu thumo lwasemhlabeni.
Khumbula, xa usenza umbono wobomi obufuna ngokwenene, uzinika injongo oza kujolisa kuyo. Kwaye ngenjongo yakho engqondweni, ubambe amandla 'okuthanda' ngaphakathi kwakho akukhokelela phambili kwaye akhokele amandla akho obomi kwindalo.
Ngononophelo lwakho kunye noqwalaselo, amandla akho okuthanda enza unyamezelo kuwe ukuze ufeze injongo yakho. Ngolu lwazi, kunye nesiqinisekiso sokubona u-444 ngokuphindaphindiweyo, amandla akho angaphakathi akunika amandla okukhetha isenzo sakho, ukusiphumeza, kunye nokukuqhubela kumbono wakho.
Xa ungayibona ngokucacileyo injongo yakho, kwaye uyizobe okanye uyibhale phantsi, umbono wakho usuka kummandla womoya kwaye uqala ukubonakala kummandla wakho wenyama . Eyona nto ibalulekileyo, umbono weenjongo zakho iba ngumboniso wendlela enokwenzeka yexesha elizayo-eyakho kuphela.
Ngombono wakho kule ndlela, ngobulumko usebenzise amandla akho ukuthi 'ndiyakwazi,' kuba uyazi la magama mabini anika amandla anokuvula indlela yamandla ngakumbi okudala ukondla ukuzimisela kwakho kunye nokwenza isicwangciso seenjongo zakho.
Kumfanekiso omkhulu, xa ubona i-444 ibonakaliswa rhoqo kwindlela yakho, sisikhumbuzo sokuba uqonde 'kutheni' ufuna ukufezekisa injongo yakho. Ngale nto uyibonayo, unesizathu esibambekayo kunye nenjongo yokugcina ukhuthazeka kuyo yonke indlela.
Gcina ukhumbula, ukuqonda kwakho injongo kuyilwa ziinkolelo zakho, into oyixabisileyo ebomini, kwaye ungubani kanye kanye. Njengoko ukhula kwaye uguquka ngokwamanqanaba ahlukeneyo obomi, Uyaqonda ukuba izinto ezibalulekileyo kuwe zingatshintsha xa ufumanisa izinto ezintsha ngawe kwaye utyhila iintsikelelo ezifihliweyo kwihlabathi elikujikelezileyo . Lilonke, ukubona ingelosi inombolo 444 kukunceda ukhumbule injongo yakho, kwaye injongo yakho sisizathu esikuqhubela kwinjongo yakho.
Nokuba uthatha isigqibo sokuphucula into ebomini bakho okanye wenze into entsha ngokupheleleyo kwihlabathi lakho, iinjongo ezondla ukuqonda kwakho kwinjongo ezinokubuguqula ngokuqinisekileyo ubomi babantu abakungqongileyo. Kwaye njengoko uqhubeka ebomini ngelixa ujonga rhoqo ukuphinda imiqondiso ye-444, ukuzithemba kwakho kukhula kuwo onke amanyathelo endlela. Kulapho ke uwaqonda khona amandla okukholelwa kuwe. Uyazi ukuba uya kuhlala ufezekisa izinto ezinentsingiselo enzulu kuwe. Kwaye xa ezo zinto zinentsingiselo zibandakanya inkululeko yakho yokukhetha ulonwabo lwakho , ukomelela kwamandla akho ngokuqinisekileyo kuya kukwenza ukuba kwenzeke kuwe.
Ke, xa uqhubeka ubona i-444, khumbula ukuba zonke izinto zinokwenzeka xa unqwenela ukuyenza. Kumfanekiso opheleleyo, konke kuqala ngenkolelo yokuba 'unako,' kwaye ekugqibeleni, 'ukuthanda ukukwenza' namhlanje.
Iingcamango ze-DIY zeeDraw eziLungelelanisiweyo
Izinto ezi-5 eziTsha eziTsha ngokufuna ukuKhangeleka zilungile kwaye zihlala ixesha elide
Ndityibilike kwi- $ 200 ekhitshini yenkunkuma, kwaye yayiyiipesenti ezingama-200 eziXabisekileyo
Iingcebiso ngokujongana nengxolo yesitrato
Ithetha ntoni ingelosi engu-222
imiqondiso yeengelosi ezindijikelezileyo
Ingelosi inombolo 1212 intsingiselo